स्वास्थ्य Archives | Page3of 54 | बिगुल न्यूज
सपनामा डराउनुहुन्छ ? बेलैमा उपचार गर्नुस् अन्यथा…
बैशाख ११, २०७५ पत्रपत्रिका
कहिलेकाहीँ डरलाग्दो सपना देख्नु सामान्य हो । तर, नियमित रूपमा डरलाग्दो सपना आउन थाल्यो भनेचाहिँ सजग हुन आवश्यक हुन्छ । यसलाई मानसिक रोगका रूपमा लिनुपर्छ । यस्तो भएमा उपचारको जरुरत …
हप्तामा एकपटक प्रयोग गर्नुहोस् यस्तो फेसियल मास्क!मिल्नेछ नसोच्नु भएको परिणाम!
बैशाख ११, २०७५ बिगुल न्यूज - ST
प्रदुषण बढेसंगै हरेकको शरीर साथै अनुहारमा विभिन्न प्रकारका बिकारहरु देखा पर्ने गर्छन्। सुन्दर मुहारको लागि धेरै स्याहार गर्नु पर्ने हुन्छ। हरेक महिना फेसियल साथै सहि स्याहारसँगै मात्र शुन्दर मुहार रहने …
यसकारण जलबिन्दु जलबिन्दुले आँखामा समस्या पार्छ । जलबिन्दु विशेषगरी ४० वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसमा देखिने गर्छ । जलबिन्दुको समयमै उपचार नगराएको अवस्थामा दृष्टिविहीनकै समस्या हुन सक्छ । मधुमेह वा उच्च …
सम्भोगपछि किन पीडा हुन्छ ?
बैशाख १०, २०७५ पत्रपत्रिका
एजेन्सी – सम्भोगपछि पीडा हुने समस्याबाट कैयौँ महिला गुज्रिरहेका हुन्छन् । अहिलेको अवस्थामा यो त्यति ठूलो चिन्ताको विषय नहुन सक्छ । तर, यसलाई नजरअन्दाज भने गर्नुहुँदैन । किनकि, यसले ठूलो …
यसरी नुहाउने तरिका परिवर्तन गर्नुहोस, हरेक समस्याको समाधान भेट्नु हुनेछ!
बैशाख १०, २०७५ बिगुल न्यूज - ST
ज्योतिषशास्त्र एउटा यस्तो विधी हो जस्मा हरेक समस्याको समाधान उपलब्ध हुन्छ। जहाँ एक तर्फ मनिसको भविष्यवाणी गर्न सक्छ भने अर्को तिर मर्कामा परेका व्यक्तीहरुको समस्या पनि हल गर्न मद्दत गर्दछ। …
तपाईलाई लाग्ने भोक कुन प्रकारको हो ? यसरी गर्नुहोस् पहिचान
बैशाख ०७, २०७५ पत्रपत्रिका
काठमाडौँ । पेट दुख्नु, पोल्नु या मच्मचाउनुको एउटा कारण भोक पनि हो । यो विषयमा सबै मानिस जानकार छन् । तर, भोक पनि कैयौँ प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुराचाहिँ धेरैको सोचाइभन्दा …
गर्मीमा घमौराले सताय के गर्ने? यी ६ घरेलु तरिकाहरु प्रयोग गर्नुहोस्!(हेर्नैपर्ने)
बैशाख ०६, २०७५ बिगुल न्यूज - ST
गर्मी मौसममा हाम्रो शरीरबाट धेरै पसिना निस्किने भएकोले धेरैलाई धमौराले सताउँने गर्दछ। गर्मीले हाम्रो ढाँड , हात लगायत छातीमा धमौरा निम्ताउने गर्दछ। यसबाट राहत पाउन मानिसहरु धेरै औषधिहरु लगाउने गर्दछन् तर यो समस्याको समाधान हामी घरमै …
तौल पनि एक समस्या हो जसले तपाईलाई तनाब दिराखेको हुन्छ। तर जसको तौल कम हुन्छ, उनीहरूले तौल बढाउनका लागि धेरै प्रकारकाले हेरचाह गर्छन्। अझ केही व्यक्तिले चाडै तौल बढाउनका लागी केहि उपाय प्रयोग गर्ने गर्दछन्, …
तपाईको कपाल लामो बनाउन साथै नटुक्रियोस भन्ने चाहनुहुन्छ? के खाने? के नखाने? हेर्नुहोस्!!
बैशाख ०४, २०७५ बिगुल न्यूज - ST
महिलाहरूले स्तनको सुरक्षा र शोभाका लागि लगाउने ब्रा विभाजित गर्ने वस्त्र हो । कतिपयले यो कुनै अर्थ नभएको वस्त्रका रूपमा बुझ्ने गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई मुक्तिको वस्त्रका रूपमा बुझ्ने …
१७ मिनेट अगाडि बिगुल न्यूज - DB
४९ मिनेट अगाडि बिगुल न्यूज - DB